ဒိုးမယ် - Page3of 38 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
ဒါဖတ်ပြီးမှ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်ပါ! ကဲ အခုမှ မီးဖိုချောင်ထဲ စဝင်မဲ့ အိမ်ရှင်မတွေရော အိမ်ရှင်ထီးတွေရောအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်လေးတွေပေါ့။ မီးဖိုချောင်ထဲရောက်မှ ခေါင်းကုတ်နေရမဲ့အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ဖတ်ထားလိုက်တော့နော်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အသုံးဝင်မဲ့အချက်လေးတွေ အခုမှ မီးဖိုချောင်ထဲကို စဝင်မယ်ပြင်နေတဲ့ ကိုကိုမမတို့ရေ.. ကိုယ်က...